China kukanda simbi pasi mubhedha ndiro ndiro vagadziri uye vanotengesa | Bocheng Co-chisikwa
Kubva pakagadzwa muna 2001, ine yakasarudzika track track.
Tsigiro yeemail hbbcgclj@163.com
Fonera Tsigiro 008613931798614
modular Welding tafura system
2D Welding tafura
Tafura yekutengesa ye3D
Nitrided kurapwa Welding tafura
Welding tafura Zvinosunga
Welding tafura loacting nenhumbi
Welding tafura yekukiya mapini
Welding tafura zvimwe nenhumbi
Welding workspace yekuwedzera accessories
Kanda simbi yepamusoro ndiro uye yekuyera maturusi
kukanda simbi pasi mubhedha ndiro
simbi dzekuyera maturusi
Ruoko - rwakaraswa simbi pamusoro peplate
Lapping kukandira simbi pamusoro ndiro
T yakatsemurwa simbi pamusoro peplate
girenayiti pamusoro peplate uye yekuyera maturusi
matombo ekuyera egranite
girenayiti pamusoro ndiro
Granite muchina zvikamu
Kanda simbi zvikamu
D28 3D yekutenderera tafura
Welcome kutishanyira kuziva zvakawanda pamusoro fekitari yedu.
OEM / ODM inowanikwa:
Yako logo pane chigadzirwa.
Yakasarudzika chigadzirwa zvinoenderana nemadhirowa ako.
Chero zano rako pane chigadzirwa tinogona kukubatsira kugadzira nekupa kudhirowa.
Zvimiro zveedu akakanda simbi pasi pemubhedha mahwendefa
● Zvishandiso zvine simba-repamusoro, rakasimba-uye rakapfigwa rakachekwa grey simbi inowanikwa paGiredhi reGG-20, GG-25 kana GG-30 inofanirwa kusarudzwa kugadzira iyo t-slotted cast iron pasi mahwendefa. Zvimwewo zvinhu senge nodular cast iron kana simbi yakakandwa inogona zvakare kushandiswa pakukumbira;
● Iyo yakarongedzwa & yakarongedzwa chimiro inopa iyo yekutanga kuomarara uye kusimba kweiyo t-slotted cast iron pasi mahwendefa. Chimiro chakasimba chinogona zvakare kupihwa sekuenderana nechikumbiro chako.
● Kuomarara kweGG-25 grey kukanda simbi yakagadzirwa t-slotted pasi mahwendefa ari muchikamu cheHB170-240. Iyo yepamusoro flatness kunyatso pamusoro wepamusoro peiyo t-slotted cast iron pasi mahwendefa anowanikwa seGiredhi I, II kana III sekureva kweDIN 876 Standarad. Iyo yepamusoro flatness kurongeka inogona kuwanikwa nekubata ruoko pachikumbiro chako. Surface hukasha pane iyo t-slotted cast iron pasi mahwendefa kazhinji Ra 3.2 μm yakawanikwa nekutora iyo CNC yakakwira-kumhanya yekugaya maitiro. Yakaderera hukasha senge Ra 1.6 μm inogona zvakare kuwanikwa nekukuya maitiro pane chako chikumbiro;
● Hurefu kushivirira kweT-slots pane t-slotted cast iron pasi mahwendefa ndeye H12 uye inogona zvakare kuve H7 kana H8 pakukumbira. Kazhinji T-slots inowirirana neyekureba nzira inopihwa, asi zvakare T-slots inotsamira kune yekureba nzira inogona kupihwa pakukumbira. Iwe unogona zvakare kukumbira kune ese maviri ekureba uye muchinjikwa t-slots pane aya t-akatsemurwa cast iron pasi mahwendefa;
● Yakavakwa uye yakavharwa ribbed, kaviri inowedzera kupisa kwekupisa patembiricha iri pakati pe600-700 ° C (iyo yekutanga annealing inoitwa uchangopedza kukanda, yechipiri annealing inoitwa chaipo mushure mekuomarara kwemuchina mundiro) uye kuchembera kunotevera kurapwa kunoitwa pane aya t-slotted cast iron pasi mahwendefa kubvisa kushushikana kune kushoma, kuve nechokwadi chakadzikama kugadzikana uye chengetedza kurongeka kwayo kwakasununguka kubva mukukanganisa;
● Kubatanidza grooves pamativi ese e-t-slotted cast iron pasi mahwendefa anogona kupihwa pakukumbira kubatanidza pamwechete zvidimbu zvemahwendefa munzvimbo hombe yeplate;
● Mapedhi ekumisikidza nekusimudza anowanikwa pamwe nemahwendefa. Vibration inotora matsime ematsutso anogona zvakare kupihwa pakukumbira;
Pashure: girenayiti pamusoro ndiro
Zvadaro: D28 3D yekutenderera tafura
Kanda Iron Floor Plate
Kanda Iron Surface Yekuongorora Plate
Kanda Iron Surface Plates
Kanda Iron T-Slotted Bvunzo Mabhedha Plates
Kanda Simbi Bvunzo Plate
T Slot Kukandira Iron Floor Plate
T-Slotted Kukanda Iron Floor Plates
Vashandi vese veHebei Bocheng Co-chisikwa Kuyera Chigadzirwa Chekugadzira Co, Ltd. vari kutarisira kushandira pamwe newe nemoyo wese.
GRANITE SULFACE MAPlate ANOTUMIRWA KUMALAYSIA S ...
ne admin pane 2021,01,12
DZAKADZIDZWA KUKUNDA SONI T MOTO ANOSIMBIRA CHIRATIDZO PASI ...
CHITSAUKO CHITSVA che3DI uye 2D Welding TABLE MU ...